IGunya lezoKhenketho laseGuyana lisungula isikhokelo sokuqala sedijithali sokuhamba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziziiGuyana » IGunya lezoKhenketho laseGuyana lisungula isikhokelo sokuqala sedijithali sokuhamba
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba eziziiGuyana • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Agasti 28, 2020
The IGunya lezoKhenketho eGuyana wenze kwaye wasungula idigital Inzululwazi, iZifundo, uVolontiya, kunye neMfundo (SAVE) Isikhokelo soKhenketho, eyokuqala kwimveliso yezokhenketho yaseGuyana.
I-SAVE Travel yenye yeendawo zokuhamba ze-Guys ezikhulayo, ngokwesiko ezihambelana nokhenketho lolondolozo-enye yeentsika eziphambili zokhenketho lwe-Destination Guyana. SAVE uhambo ngoyilo ludibanisa abahambi abanenkathalo, nokuba ngaba ngabafundi, abaphandi okanye izifundiswa, kunye nabaqhubi bezokhenketho ngokubambisene nabo kunye neendawo zokulala zokuqhuba iihambo ezilungiselelwe zijolise ekukhuleni komntu, kuphando lwezenzululwazi, ekuphuculeni uluntu, kunye / okanye ekufumaneni ulwazi okanye ikhredithi yokufunda eGuyana imvula kunye nemimandla ye-savannah.
Isikhokelo sohambo se-SAVE saphuhliswa ukunceda ukuba kumiselwe ngokusemthethweni icandelo lezeNzululwazi, elezeMfundo, lamaVolontiya, kunye nelezeMfundo eGuyana kunye nokukhuthaza ukuphuculwa kokunyuka kwamava ohambo kwimimandla engatyelelwa kangako eGuyana kunye nokwandisa utyelelo kwiisekethi zokhenketho ezithandwayo ngexesha lesiko incopho 'okanye amaxesha emvula. Oku kuvumela ingeniso yokhenketho ukuba isasazwe ngokulinganayo ngokwejografi nakunyaka wonke.
Esi sikhokelo sijolise ekomelezeni ubudlelwane phakathi kwabaphandi, amaziko amaqabane, SAVE ababuki zindwendwe kunye nababoneleli beenkqubo kwaye baphakamise ulwazi kunye neemfuno zentengiso kwiimarike eziphambili zaseGuyana- eMntla Melika, e-United Kingdom nase-Benelux Region, nakwiimarike ezithetha isiJamani.
Imibutho yasekhaya kunye neendawo zokulala ezixhamla kwaba bahambi zibandakanya kodwa azikhawulelwanga kwiziko i-Iwokrama International Centre for Rainforest Conservation and Development, Karanambu Lodge, Surama Eco-lodge nelali, kunye ne Waikin Ranch.
UBrian O'Shea, ophethe i-Ph.D. kwiNzululwazi yezebhayoloji kwaye okwangoku evela eMyuziyam yaseNorth Carolina yezeNzululwazi yezeNdalo, wayengumbhali okhokelayo wesikhokelo esisekwe kulwazi lwakhe olubanzi ngale niche yokuhamba kunye namava ohambo lobuqu eGCINA eGuyana.
“UKULUSA uhambo kuqhutywa ngumnqweno wokunxibelelana ngokusondeleyo nendalo, inkcubeko kunye nabantu bendawo esinge kuyo ngelixa siqhubela phambili ulwazi kunye negalelo kuphuculo lwelizwe elisindlekileyo. Kudala ndicinga ukuba iGuyana inamandla amakhulu okuphuhlisa ubudlelwane obomeleleyo kulo mmandla kwaye ndiwongekile ngokuba yinxalenye yale projekthi, ”utshilo uBrian O'Shea.
Abalawuli bangaphambili nabangoku beGunya lezoKhenketho eGuyana babelane ngeemvakalelo ezifanayo njengoko bobabini bebeya kubandakanyeka ekuncedeni ukwenza esi sikhokelo.
"IGuyana ibekwe ngokukodwa ukuba iqhubele phambili kuphando, ukufunda, kunye neenkqubo zenkonzo ezibhiyozela yonke into enikezelwa lilizwe njengendawo ekhokelayo neya kunceda ukwandisa iimpembelelo zokhenketho kwilizwe," utshilo uBrian T. Mullis, owayesakuba nguMlawuli ye-GTA.
UCarla James, uMlawuli wangoku, uqhubeka athi, “Ndiyazingca kakhulu ngokuhamba phambili okwenziwe yiGuyana kule minyaka idlulileyo yokwaziwa njengendawo enikezela indalo, amava enkcubeko nolondolozo olusekwe kulondolozo olunceda ukubuyisela ilizwe. Isikhokelo sohambo sokugcina siza kunceda ukomeleza ulwazi malunga nale mveliso inika le ntengiso ikhulayo. ”
Esi sikhokelo siza ngexesha uhambo lokuhamba nokhenketho luhamba ngokukhanya kwesibetho se-COVID-19. Abakhenkethi abaninzi bajonge ukutyelela indawo ezinabantu abaninzi, indawo esekwe kwindalo egxile kuphuhliso nolondolozo lwendalo kunye nezilwanyana zasendle. Isikhokelo sohambo sokugcina siza kunceda ukuqinisa ngakumbi eli bali kwaye sinokusetyenziswa njengesixhobo esiphambili sabahambi abacwangcisa uphando lwabo, ukufunda kunye nohambo lwenkonzo.